माधव काम्रेडको पर्याय : बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, साउन ३१, २०७८ मा प्रकाशित
हेर भिरघरे ! मान्छे–मान्छे बिचमा तुलना नगर्नु भन्छन्, तर म त तुलना गर्नै पर्छ भन्ने ठान्छु । वर्तमान परिप्रेक्षमा माधव नेपाल जस्तो दुरदृष्टि भएको नेता कोही छैन । हेर्दाहेर्दै हाम्रो पार्टी माओवादीतिर आउने भए । माधव, झलनाथ, झाक्री, मेटमणि, विरोध, जगन्नाथ खतिवडा, मुकुन्द, प्रकाश ज्वाला, विमला वोली लगायतले निर्णय गरी सके ।
भनेपछि विध्वाँसे काका ! तिमार्को पार्टी पनि ठूलो बन्ने भयो । हुन त चार वर्ष अघिसम्म माओवादीको केन्द्रीय सदस्य नै पाँच हजार जति थिए क्यारे ! अब तिमार्को पार्टी त्यो भन्दा ठूलो बन्छ । माधवसंग जति आम्छन् सपलाई केन्द्रीय सदस्य दिन परिहाल्छ ।
के कुरो गर्छस् भतिज हाम्रो राष्ट्रनायक महान काम्रेड प्रचण्ड नसोची कुनै काम गर्दैनन् । विस्तारै एमसिसी पास गर्ने माहोल बनाम्छन् । विकासका काम भनेको कांग्रेसले गरे गर्छ नगरे गर्दैन । हाम्रो माओवादीहर्ले मन्त्री भाको पहिलो दिन नै स्वास्थ्यलाई भनेर पाँच अरब निकासा गरी सके । अब अरु पनि गर्छन् ।
गर्छन काका गर्छन ! हाम्रो देउवा दाइ जस्तो सोझो मान्छे भेटेको छ । प्रचण्डले देउवा माधव सबैलाई घुमाउने भए ।
नमस्कार है, काका–काकी । म पनि कता जाउँ कता जाउँ भयो अनि चिया पसल पुगेर यतै आएँ । एमालेको कार्यालयमा सदस्यता नविकरण गर्दै रान। मैले पनि नविकरण गरेर आएँ ।
लौ सण्डे पनि काम लाग्ने भएन । अस्तिसम्म माधव नेपाल नै ठिक भनेर हिड्दै थियो, अहिले आएर ओली कै पार्टीमा हामफालेछ । हैन त्यो पार्टीमा के देखेर लागेको हँ ! सप्पै माधवतिर आउने भए यो चै ओलीतिर गएछ । झाक्री, मेटमणी, जगन्नाथ खतिवडा जस्ता काम्रेडहर्ले ओलीलाई छोड्ने भै सके ।
होइन नि काका ! सप्पैतिरका कार्यकर्ता जति एमाले र सूर्य चिन्ह जता हामी उतै भनेर ओलीतिरै लागी सके । यही जिल्लामा पनि माधवतिर जम्मा तीनजना छन् । चुनापमा एमाले र काँग्रेसकै भिडन्त हुन्छ । माधव–प्रचण्डहर्को त नपत्याउँ । माधव त उछिट्टिएर भुइँमा झरेको टुक्रा जस्तै भए ।
भाइले ठिक कुरो ग¥यो । हुन त म कांग्रेस हुँ । तर, एउटा कुरा ठोकेर भन्छु कांग्रेसको प्रतिस्पर्धा भनेको एमालेसंगै हो । अरु ऐरे गैरे तन्थु खैरेसंग होइन। यो जिल्लामा भन्ने हो भने तिम्रो माओवादीले एउटा वडा सदस्य पनि जित्दैन । माधवको हालत पनि त्यही हो । त्यस कारणले यो सण्डे भाइको निर्णय ठिक हो ।
तैंले भनेर हुन्छ भिरघरे ! हाम्रो सर्वहारावादी नेता, जनजनका हृदयका ढुकढुकी, राष्ट्रनायक, महान र उग्रक्रान्तिका खासै आफन्त, काम्रेड प्रचण्डले अस्ति ऋषि धमलालाई भनी सके– अबको चुनापमा माओवादी नै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्छ भनेर ।
यी बुढाको कुरै यस्तै हो । संगठन चैं कहाँ छ र ठूलो पार्टी बन्छ ? चितवनमा जस्तो मतपत्र च्यात्ने र चपाउने गर्दैमा ठूलो पार्टी त बन्दैन होला ! कि कसो भिरघरे !
के भिरघरेलाई सोध्छेस् झुम्री ! तेरो ओलीको पार्टी एमाले भन्नेको नामोनिशाना नराख्ने भनेर प्रचण्ड काम्रेडले भनी सकेका छन् ।
झिङ्गाको सरापले डिङ्गा मर्दैन काका ! प्रचण्डको गफले चिउरा भिज्दैन, दुनियाँले पत्याउदैन । अघिनै सण्डेले भनी हाल्यो यही जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने चुनापमा जम्मा भोट दुई तीन सय तिमार्को, दुई तीन सय माधवको आउला…!
खसालेर नबोल भिरघरे ! तेरो पार्टीको सभापति देउवाले एक महिनामा मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्न सकेको छैन । अहिले नै हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डलाई आरोप लगाउन थालि सके ! अनि किन बढी कुरो गर्छस् । तेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि भदौ २३ गतेपछि अबैधानिक हुन्छ । महाधिवेशन गर्न नसकेपछि बैधनिकता सकिन्छ । चुनापमा तिमारु स्वतन्त्र उठ्नु पर्ने हुन्छ !
नाप्पियो ! ३५ वर्षसम्म तिमारु माओवादी भनाउँदाहर्ले महाधिवेशन नगर्दा हुने हामीले नहुने भन्ने कहाँ लेखेको छ र !
काका र दाजु झगडा नगर्दा हुन्छ । देउवा, प्रचण्ड, माधवहरु काम लाग्ने नेता होइनन् भन्ने कुरा प्रष्ट भै सक्यो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर महाकालीमा मान्छे मारेपछि नदीमा लाश खोज्न समेत दिएन, तुइनका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन अनुमति दिदैन । हाम्रा यी नेता भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई विरोध जनाउन समेत सक्तैनन् । ओली हो भने कमसेकम फोन गरेर विरोध त जनाउँ थे ।
सण्डेले ठिक भन्यो ! यिनारु काम लाग्दैनन् । एमसिसी के हुन्छ, यो सरकारले एमसिसीको बारेमा के भन्छ भनेर पर्खेका जनतलाई नबोलेरै जिती राखेको छ । यो सरकारको योजना ओलीलाई गाली गर्ने मात्रै हो भने भन्नु केही छैन, होइन भने देश विकास र जनहितका बारेमा खै योजना? बिचरा देउवाका पालामा भुटानले दिएको तीन लाख डोज खोप नै ऐतिहासिक काम भएको ठहरिने भयो ।
केही हदसम्म त काकीले भनेको ठिकै हो । हाम्रो देउवा दाइ यसपालि केही गर्ने भन्नेमा थिए तर प्रचण्डले दिदैनन् । माधव विचरा बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भै हाले । प्रचण्डले अँगालो हालेपछि राम्रो काम केही हुँदैन । माधवलाई पनि देउवालाई पनि अँगालो हालि हाले । अब केही हुने वाला छैन।
मेरो कन्सिरी तात्ने कुरा नगर भिरघरे ! प्रचण्डले गर्दा एमालेको मत समेत देउवाले पाए । विचरा माधव नेपालले आफ्नो राजनीतिक भविष्य समाप्त हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि प्रचण्डको विश्वास गरेर आफ्नो त्यस्तो दह्रो र विशाल कार्यकर्ता पंंक्ति भएको पार्टी परित्याग गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए । आफ्नै अध्यक्षलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी तीन पटक हटाएर प्रधानमन्त्रीबाट पनि हटाए !
हो काका ठिक भन्यौ । आफ्नै राजनीतिक भविष्य समाप्त पार्ने, आफ्नै पार्टीप्रति गद्दारी गर्ने र आफ्ना भन्दा अरुलाई ठिक देख्ने मनोदशाले गर्दा भविष्य भएका राजनीतिक व्यक्ति माधव समाप्त भए । ओलीको टाँङ मुनी नछिर्ने अरे । देउवा र प्रचण्डको टाङ मुनी छिरी सकेपछि ओलीको टाङ मुनी किन छिर्नु ! ठिक भने । अहो काका ७ बजे छ । म लागें उभिण्डे खोलातिर ।